WARARKII UGU DAMBEEYEY SHIRKA NAIROBI
Habsami u socodkii shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ee Kenya muddada 8da bilood iyo badhka ka socdey ayaa kaddib markii ay hogaamiyaasha soomaalida isku mari waayeen qodobo ka mid ah axdiga ku meel gaadhka ah hakad galay. qodobada ragaadiyey shirka ayaa waxaa ka mid ah inta ay noqonayaan xubnaha golaha baarlamaanka, mudada ku meel gaadhka ahi ma waxay noqonaysaa mid federaal ah mise midnimo qaran ayaa lagu meel marayaa iyo cidda xulaysa xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka ku meel gaadhka ah.
Milicsiga Axdiga ku Meel Gaarka ah ee uu soo akhriyey Ibraahim Maxammeddeeq March 15, 2003 GUJI...
Hogaamiyaasha Soomaalida ayaa goor hore iyagoo Eldoret ku sugan ku heshiiyey inuu tirada golaha baarlamaanku noqdo 450. mar kale intii ay ku sugnaayeen Mbagathina waxay isku raaceen sidaas oo kale laakiin kuwa ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadda ayaa si cad uga hor yimid inuu baarlamaanku tiradaas noqdo. Wakiilada bulshada caalamka shirka ka jooga ayaa iyaguna dhawr goor ku cel-celiyey inaysan macquul ahayn in tirada baarlamaanka 250 laga badiyo. Ka gudubka qodobadan iyo xal u helidooda ayaa adkaatay kaddib markii madaxda Soomaalida laga waayey isu tanaasul dhex mara, waxaana dhawr goor lagu fashilmay in qoraalka axdiga ku meel gaadhka shir weynaha ergooyinka la hor geeyo. Maalinimadii Jimcaha ayaa hoolka shirka la isku deyey in lagaga doodo axdiga balse ma suuro gelin. waxaana golihii shirka ka bilowday buuq iyo bulaan sababay in shirka lagu kala dareero.
Si kastaba ha ahaatee ninka Soomaalida shirkan ku dhex-dhexaadinaya Danjire Kiplagat ayaa ilaa iyo maanta ku hawlanaa inuu siyaabo kala gaar-gaar ah ula kulmo kooxaha arimahan ku muransan. Maanta gelinkii hore wuxuu la kulmay hogaamiyaasha G8 & TNG. Wuxuuna u soo bandhigay qorshe uu ku doonayo in meel dhexe la isugu yimaaddo. Qodobadii ay G8 &TNG ay Kipligat maanta isla ogolaadeen ayaa waxaa ka mid ahaa in tirada baarlamaanka laga dhigo 315 oo ay xulayaan hogaamiyayaasha siyaasadda, kuwa dhaqanka iyo dar kale oo loogu yeedhay siyaasiyiinta. Waxaa kaloo Mr. Kipligat u qorshaysan inuu qorshahan cusub ilaa berri kala hadlo hogaamiyayaasha kale iyo kooxaha kale ee madasha shirka ku sugan.
Khilaafka ka oogan axdiga ku meel gaadhka oo sidaynu soo sheegnayba khal-khal weyn shirka ku haya ayaa iminka ah daaha qudha ee ka hadhay najaxaadda shirka maadaama horay looga soo faraxashay shantii qoraal ee kale ee uu wejiga 2aad ee shirku ku saabsanaa. Iyadoo ay tahay marka wejiga 2aad laga gudbo in wejigii 3aad ee shirka lagu soo khatimayo la galo.